Trump: Hala iisoo hormariyo dacwada xil ka xayuubinta. - NorSom News
Trump: Hala iisoo hormariyo dacwada xil ka xayuubinta.
Laakiin waxaa hadda taagan ismari-waa ku aaddan xilliga la billaabayo kiiskaas, kaasoo u dhaxeeya siyaasiyiinta labada xisbi ee Dimuqraaddiga iyo Jamhuuriga.
Previous articleTaageero dhaqaale uruurin ah oo internetka looga wado hooyo soomaali ah.
Next articleMuhiim: Sharciyadan ayaa dhaqan-gali doono sanadka cusub ee 2020.